Sudaan: Waraanniifi mormitoonni Sudaan jaarsummaa Itoophiyaatiin mareetti deebi'eera - BBC News Afaan Oromoo
Sudaan: Waraanniifi mormitoonni Sudaan jaarsummaa Itoophiyaatiin mareetti deebi'eera
Image copyright Ethiopian Embassy in the Sudan
Gareen mormitootaa Sudaan guyyoota sadiif itti fufuun hojii, geejibaafi tajaajilli akka dhaabatu waamicha dhiyeessee ture dhaabsise.
Humnoonni Labsii Bilisummaafi Jijjiiramaa (FDFC) jedhamu akka fuula feesbuukii isaarratti bareessetti, diddaan gaggeeffamee ture "mana maree humna waraanaarraan kasaaraa siyaasaa guddaa geessiseen milkaa'era jedheera.
FDFC'n erga Itoophiyaan jaarsummaadhaaf gidduu seentee booda bulchiinsa siiviliin akka hundaa'uuf Mana Maree Humna Waraanaa Ce'umsaa (TMC) waliin mareetti deebiyuudhaaf waliigaleera.
Gareen mormituu kan ministera muummee ta'uun filatamuu akkasumas miseensota mana maree ce'uumsaa haraa filatamuuf jedhu 15 keessaa teessoo saddeet argachuu isaas fudhateera.Qondaalli Itoophiyaa humna nageenyaa Sudaaniifi garee mormitotaa araarsuuf yaalaa jiran akka jedhanitti oggantoonni gama lamaaanuu waan araaraa falachuuf jiru jedhan.
Gareen mormitootaa addatti akka jedhanitti, duula diddaa karaa nagaafi mormiiwwan bakka adda addaatti babalateeru akka dhaaban walii galaniiru.
Humni waraanaa erga Omar al-Bashir aangoorraa ari'amanii kan bulchaa jiran ammoo gama isaatiin akka namoota siyaasaa hidhaa jiran akka gadhiisan himuu isaanii, qondaalli araaraa Ambasaddor Mohaammed Diriir ripoorterootatti himaniir.
Jaarsummaan MM Abiy maal fiduu danda'a?
MM Abiy Ahimad tokkummaa humnoota Sudaan gaafatan
Mormitoonni dimokiraasii deggeran akka mootummaan humna waraanaa irraa gara mootummaa siviliitti akka deebiyu barbaadu.
Waxabajji 3 erga mormitoota daandiitti ba'an diiguudhaaf tarkaanfii fudhatameen namonni dhibbatti siqan ajjeefamanii mareen addaan citee ture. Yeroo sana irraa kaasee mormitoonni mormii diddaa waamicha dhiyeessanii, biyyattii gara caalu keessatti gabaafi hojiin cufamee ture.
Mormii gidduu kana gaggeeffameen namoonni 118 ta'an ajjeefamuu doktoroonni gabaasaa kan jiran yommuu ta'u, aanga'oonni garuu lakkoofsa namoota ajjeefamanii kana 61'tti gadi butanii miidhaa xiqqoon ture jechuun gabaasaa turan.
Yeroo sanaraa kaasee loltoonni daadiiwwan magaalawwan Sudaan keessa jiran irra deemanii to'achaa turan, manneen daldalaafi hojii gara garaa garuu akkuma cufamanitti turaniiru.
Amma maaltu ta'e?
Kibxata, qoondaalli Itoophiyaa araraaf ergame akka jedhanitti, mariin mootummaa sivilii bakkatti deebisuu dafee jalqaba jedhan.
Tarkaanfii wal amantaa uumuu fudhachuudhaaf loltuun biyyattii ammoo namooota siyaasaa hidhaman hiikuudhaaf waliigaleera, jedhan Ambaasaddor Mohaamman Diriiri.
Gareen mormitii Alliance for Freedom and Change jedhamu ammoo namoonni gara hojii isaaniitti akka Roobiirraa eegalee deebiyaniif waamicha dhiyeessaniiru.
Waldaan Hojjetootaa Sudaan (SPA), kan jalqaba mormiin akka gaggeeffamuuf waamicha dhiyeese, yaada mormiin yerodhaaf haa dhaabbatu jedhu akka fudhatan himanii lammileen ammas yeroodhaaf akka hojiiitti deebiyan waamicha godheera.
Suuqonniifi tajaajilwaan gariin hojiitti deebiyanii akka banamanis gabaafameera. Keessumaa dhaabileen daldalaa xixiqqaatti lammilleen bobba'aniifi hojii humna guyyaan kanneen jireenya gaggeeffatan cufanii turuu hin danda'an.
Gaggeessitoonni humna waraanaa mareetti deebiyuu isaanii ifatti hin mirkaneessine.
Rakkoon Sudaan keessaa maaliif biyyoota gara garaa hawwatee?
Waraanni Sudaan filannnoo hatattamaa akka gaggeessu hime
Bulchiinsi al-Bashir goolabamuufi tilmaamni jedhu guddataa jira
Haata'u malee, miseensi Mana Maree Humna Waraanaa Ce'umsaa *TMC), BBC Arabic'tt akka himanitti waliigaltee aangoo "walqixa" mormitoota waliin qooddachuu kan jedhu fudhachuu danda'a.
Haata'u malee, TMCn gaggeessaan mana maree haaraan loltootarraa ta'uu qaba ejjennoo jedhutti ni cicha jedhu.
Goodayyaa suuraa Mormiin ture hojii hedduu danqee ture
Kana malees, qondaaltonni miseensa humna waraanaa ta'an hangi tokko rakkoo Waxabajji 3 uumameef itti gaafatamoodha jedhan. Loltoonni dhibbaan lakkaa'aman. qondaaltota dabalatee to'annaa jala oolchuudhaan seera addunyaa humna akka malee fayyadamuu jedhu hojiirra oolchuuf yaalameera.
Garuu TMCn haal-duree tokko malee marii waliigalteedhaaf taa'uudhaaf fedhii ni qabaata.
Kibxata darbe ammoo dippilomaatiin US gara Sudaan deemuudhaan mariin garee lamaan gidduutti akka jalqabamu taasisuuf jira jedhameera.
Oduun gara mariiti deebiyuu jedhu kun daawwannaa Ministirri Muummee Itoophiyaa abiy Ahmad (PhD) garee gidduu lamaan seenuun akka walitti dhufan erga taasisaniin boodadha.
Ministirri Muumichaas garee lamaan walitti fidanii akka mariin falatan taasisaniiru.
Akka gabaasaaleen tokko tokko jedhanitti Abiy (PhD) mana maree miseensa 15 of keessaa qabu yeroo turtii ce'umsaatiif akka hundeeffatan yaada kan dhiyeessan yommuu ta'u, kunis miseensonni saddeti warra sivilii torba ammoo aanga'oota loltuu akka ta'an yaaduun ture.
26 Caamsa 2019
Wal-dhabdee Sudaan: Jaarsummaan MM Abiy maal fiduu danda'a?
8 Waxabajjii 2019
Rakkoo Sudaan: Taateen Sudaan maaliif Sa'uudii, Ijipti, Tarkiifi Raashiyaa dhibe?
Sudaan: Filannnoon hatattamaa ji'oota sagal gidduutti gaggeefamuuf
Omaar al-Bashir ganna 30'n booda aangoorraa bu'anii waraanni aangoo qabateera
Mormii Sudaan: Waraanni al-Bashir aangoorraa buusus uummanni Sudaan manatti hin gallu jedhan